mairie-antananarivo – Fanazavana nataon’ny kaominina antananarivo renivohitra momba ilay fanakatonana trano tsy ara-dalana tetsy tsiazotafo.
auteur 22 desambra 2017 Commentaires fermés
Nanome fanazavana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra momba ilay fanalana ny olona mipetraka ao amin’ny trano iray etsy Tsiazotafo izay nataon’ny vaditany ny zoma 09 sy 15 Desambra 2017 lasa teo .Noho ny tsy fanarahana fenitra ny fahasalamana sady ahiana hitera-doza.
Araka ny fitsirihana natao teny an-toerana tamin’ny taona 2016 dia voamarina fa trano tsy manaraka ny fenitra aram-pahasalamana io trano io nefa manamorona ny arabe sy ifamezivezen’ny olona .
Taorian’ny “Déclaration d’insalubrité” dia namoaka ny ARRETE MUNICIPAL Laharana 387-CUA/CAB.17 ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana izay mandrara ny fipetrahana ao ary mandidy ny tompony hanamboatra io trano io ao anatin’ny enim-bolana .Izany no natao dia ho fampiharana ny andiny faha 52 “Code de Santé Public”.
Noho ireo antony ireo dia nisy didim-pitsarana nivoaka izay tohin’ny andininy faha 55 Code de Santé Public.Taorian’izay dia nisy ny didim-pitondrana laharana 6699 avy any amin’ny fitsarana ady maika nanala ny olona sy ny mpivarotra ao amin’ilay trano ary mandidy ny fampiarana izany avy hatrany mba ahafahana manamboatra ny trano .
Naanton’ny didy laharana 228 ny fitsarana ambony io didy io saingy mbola noho ny fisian’ny fampiakarana dia naanton’ny Fitsarana Tampony indray izany tamin’ny alalan’ny didy N° 851-PPCS/ 17. Na teo aza ny fangatahana fisintonana nataon’ireo olona mipetraka amin’ny trano dia nolavin’ny fitsarana ambony izany tamin’ny alalan’ny didy laha 902-PPCS/17.
Noho izany dia ny didim-pitsarana no nampiharin’ny vadin-tany fa tsy ny kaominina no manala olona tamin’ny trano.